ဒီမြှင့်တင်ရေးအကြားတက်ကြွဖြစ်လိမ့်မည် 00:01 နှင့် 23:59 on 4th, 11ကြိမ်မြောက်, 18ကြိမ်မြောက်, 25ဇန်နဝါရီလကြိမ်မြောက် 2018.
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -8.30hrs, PTZ + 8နာရီ
£ 10 အကြားသိုက် & တစ်ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်£ 19 10 အပိုဆုလှည့်ဖျား.
£ 20 အကြားသိုက် & တစ်ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်£ 49 20 အပိုဆုလှည့်ဖျား.
တစ်ဆုကြေးငွေကိုလက်ခံရရှိရန်အထက်£ 50 သို့မဟုတ်ငွေသွင်း 50 အပိုဆုလှည့်ဖျား.
အခမဲ့လှည့်ဖျားအထိကြာနိုင်ပါတယ်3သင့်အကောင့်မှအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့မြှင့်တင်ရေးရဲ့အဆုံးကနေအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံး. လှည့်ဖျားကနေမဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့အပိုဆုရန်ပုံငွေများအတွက်ချီးမြှင့်ကြသည်.
အပိုဆုရန်ပုံငွေများ 30x ၏အာမခံလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဆုကြေးငွေပမာဏကိုများ၏ပေါင်းလဒ်သယ်ဆောင်နှင့်မဆိုအနိုင်ရရှိတဲ့အဖြစ်သို့ငွေသားအဖြစ်ပြောင်းလဲခင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရမည်ဖြစ်သည်.
ဒီမြှင့်တင်ရေးထံမှရရှိခဲ့ပြီးအပိုဆုရန်ပုံငွေများ, အချို့သော slot ကဂိမ်းပေါ်မှာကစားရန်သာသုံးနိုင်တယ်.
4x ကကူးပြောင်းခြင်း: ဆုကြေးငွေရန်ပုံငွေထဲကနေငွေသားမှအများဆုံးပြောင်းလဲခြင်းငွေပမာဏ 4x မှာချီးမြှင့်သည့်ဆုကြေးငွေပမာဏကိုအဖြစ်သို့ပေးလိမ့်မည်. အာမခံပြီးပြည့်စုံသည်တစ်ချိန်ကအပိုဆုရန်ပုံငွေများကိုအလိုအလျှောက်ပြောင်း.
အပိုဆုရန်ပုံငွေများကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့်အောက်ပါဂိမ်းများကိုအပေါ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း: Dracula, သေနတ် '' N ကို’ နှင်းဆီပန်း, လူးစ Hendrix, ဘုရားသခင့ Fortune မဂ္ဂဇင်း, အဆိုပါမမြင်နိုင်သောက Man, ကျွန်း O'Plenty, Gong Xi Fa Cai, ပိုများသောမျောက်များ, Genie ထီပေါက်, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Batman, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Green Lantern, Holly Madison နှင့်အတူတစ်ဦးညနေခင်း, Psycho, ဂျိမ်းစ်ဒင်း, အဆိုပါဝက် Wizard ကို, Thunderstruck II ကို, , , ကြောင်, ငရုတ်သီးရွှေ, ဥရောပကစားတဲ့, Sparta ၏ဆောင်ခဲ့, ရှေ, Gorilla Go ကိုတောရိုင်း, hi-အနိမျ့ Blackjack, hi-အနိမျ့ Gambler, ချိတ်သူရဲကောင်း, ထီပေါက် Jester တောရိုင်းအလုပ်မလုပ်, JJ50K, တိုက်ရိုက် Baccarat, တိုက်ရိုက် Blackjack, ကစားတဲ့ Live, ကံကောင်းလာရီ Lobstermania, MegaJackpots လီယိုပတ်ထ, Megajackpots Siberian မုန်တိုင်း, Megajackpots စတား Lantern, Megajackpots Wolf က Run ကို, နဂါးနိုင်ပွဲများ, Motorhead, အမေရိကန်ကစားတဲ့, Blackjack Classic, အိုအေစစ် Poker, ဆိပ်ခံ, တက္ကဆက်ပြည်နယ် Holdem, Fury ၏ယက်, အဆိုပါဝံ၏ဂြိုဟ်, Atlantis ၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, slots-o-ရွှေ, လှည့်ဖျားစုန်း, Starmania, မျှော်စင် Steam, စူပါစိန် Deluxe, စူပါတိုးတက်မှုနှုန်း, ထိပ်တန်းကြောင်, အဆုံးစွန် X ကိုငါးခု Poker Play, Fortune မဂ္ဂဇင်း၏ဗိုက်ကင်း, Winstar, Wolfpack, worms နဲ့ Harley Davison Freedom ကိုလှည့်လည်.
ကစားသမားတစ်ဦးတည်းသာဆုကြေးငွေတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်မှာတက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်, သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး “အကြှနျုပျ၏ပရိုဖိုင်းကို” သင့်ရဲ့တစျခုလုံးကိုဆုကြေးငွေတန်းစီကြည့်ရှုရန်အပိုင်း
စံသတ်မှတ်ချက်များကို & အခွအေနလျှောက်ထား.
တာဝန်သိအလောင်းအစား ကျေးဇူးပြု.. ပိုမိုသိရှိလိုပါကများအတွက် www.begambleaware.org သွားရောက်ကြည့်ရှု.
ဒဏ္ဍာရီလှည့်ဖျား DROP ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အအခြေအနေ – လူ့အဖွဲ့အစည်းတခု, Mega ပွဲစဉ်